कसले आवधिक तालिकालाई सम्बोधन गर्यो?
तत्वहरूको मौलिक तालिकाको उत्पत्ति
क्या तपाईं जान्दछन् कि जो तत्वहरु को पहिलो आवधिक तालिका को वर्णन गरे हो जो कि परमाणु वजन बढाने वाला तत्वहरु र उनको गुणहरु मा प्रवृत्तियों को अनुसार तत्वहरु लाई व्यवस्थित गर्दछ?
यदि तपाईंले "दिमित्री माडेलेभ" लाई जवाफ दिनुभयो भने तपाई गलत हुन सक्नुहुनेछ। आवधिक तालिका को वास्तविक आविष्कारक कोमिकल इतिहास को किताबहरु मा शायद नै कभी उल्लेख गरिएको छ: चैनरोटोस।
आवधिक तालिकाको इतिहास
अधिकांश व्यक्तिहरूले मेन्डेलेभले आधुनिक आवधिक तालिकाको आविष्कार गरे।
दिमित्री मादालेवले69, 1896 मा रासायनिक रासायनिक सोसाइटीको प्रस्तुतीकरणमा परमाणु वजन बढ्दै आएका तत्वहरूको आफ्नो आवधिक तालिका प्रस्तुत गर्यो। मन्डेलेभको तालिका वैज्ञानिक समुदायमा केही स्वीकृति पाउन पहिलो थियो, यो यसको दबाइ पहिलो तालिका होइन।
केही तत्वहरू पुरातन समयबाट सुनको रूपमा चिनिन्थ्यो, जस्तै सुन, सल्फर, र कार्बन। अलम्यास्टहरूले 17 औं शताब्दीमा नयाँ तत्वहरू पत्ता लगाउन र पहिचान गर्न थाले। 19औं शताब्दीको सुरुवातमा, लगभग 47 वटा तत्वहरू पत्ता लगाइएको थियो, किन्मिस्टका लागि पर्याप्त डेटाहरू ढाँचा हेर्न सुरु गर्न। जॉन न्यूइल्सले 1865 मा अक्टोभान्सको कानुन प्रकाशन गरे। अक्टोबरको कानून एक बक्समा दुईवटा तत्व थिए र अदृश्य तत्वहरूको लागि ठाउँलाई अनुमति दिईन, त्यसैले यो आलोचना र मान्यता प्राप्त भएन।
एक वर्ष अघि (1864) लथर मेरेले एक आवधिक तालिका प्रकाशित गरे जसले 28 वटा तत्वहरूको स्थान निर्धारण गरे।
म्यायरको आवधिक तालिकाले तत्वहरूलाई आफ्नो परमाणु वजनको क्रममा व्यवस्थित गर्न आदेश दिएको छ। तिनको आवधिक तालिकाले तत्वहरूलाई6वटा परिवारमा आफ्नो मूल्यको आधारमा व्यवस्थित गर्यो, जुन यो सम्पत्ति अनुसार तत्व वर्गीकरण गर्ने पहिलो प्रयास थियो।
जबकि धेरै व्यक्ति तत्व आवधिकता र आवधिक तालिका को विकास को लागि माईव योगदान को बारे मा सजग हो, धेरैले अलेक्जेंडर-एमिले बेगेउ डे डे चान्कोटोटोस को बारे मा नहीं सुना छ।
डे Chancourtois पहिलो वैज्ञानिक थियो कि रासायनिक तत्वहरु को व्यवस्था को लागि उनको परमाणु वजन को क्रम मा। 1862 मा (मन्डेलेभभन्दा पाँच वर्षअघि), डे चान्न्टोटोइसले एक पत्र प्रस्तुत गरे कि तत्त्वका प्रबन्धहरू फ्रान्सेली अकादमी अफ साइंसेन्सका प्रबन्ध। कागज अकादमी एक पत्रिका, Comptes Rendus , मा प्रकाशित छ, तर वास्तविक तालिका को बिना प्रकाशित। आवधिक तालिका अर्को प्रकाशनमा देखा पर्यो, तर यो अकादमीको जर्नलको रूपमा व्यापक रूपमा पढ्न सकेन। डी Chancourtois एक भौगोलिकवादी थियो र उनको कागज मुख्यतः भौगोलिक अवधारणाहरु संग व्यवहार गरे, यसैले उनको आवधिक तालिका को दिन को chemists को ध्यान नहीं पाईयो।
आधुनिक आवधिक तालिकाबाट फरक
दुवै चान्कोरोटोस र मेन्डेलेभले परमाणु वजन बढाएर संगठित तत्वहरू। यसले अर्थ बनाउँछ, किनकि परमाणुको संरचना समय समयमा बुझ्न सकेन, त्यसैले प्रोटोन र आइसोटोन्सका अवधारणाहरू वर्णन हुन सकेन। आधुनिक आवधिक तालिका तालिका तत्वहरु लाई परमाणु भार बढाने को बजाय मामाणिक संख्या बढाने को अनुसार। सबैभन्दा बढी भागको लागि, यसले तत्वहरूको अर्डर परिवर्तन गर्दैन, तर यो पुरानो र आधुनिक तालिकाहरू बीचको महत्त्वपूर्ण भिन्नता हो। अघिल्लो टेबलहरू वास्तविक आवधिक तालिकाहरू थिए किनभने उनीहरूले उनीहरूको रासायनिक र शारीरिक गुणहरूको अवधिमा तत्वहरूलाई समूहबद्ध गरे।
किन Lanthanides र Actinides आवधिक तालिका मा अलग छन्
लिथियम आइटोपेस - रेडियो सक्रिय डेय र आधा-लाइफ
फ्लोरोभियम वा युनिनक्डियम तथ्यहरू - फ्ल ए तत्व 114
सबै आयरन चुम्बकीय छ
यहाँ कसरी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको साथ आवधिक तालिका डाउनलोड गर्ने हो
एचटीएमएल कोड - चर र प्रतीकहरू
सामाजिक मिडिया डिग्री: प्रकारहरू, शिक्षा र करियर विकल्पहरू
प्रत्येक राज्यमा कति मतदाताहरू छन्?
चित्रा स्केटिङमा प्रसिद्ध व्यक्तिहरूको फोटोहरू
Pogies संग मत्स्य पालन
परमेश्वरको वचन सुनेर बाइबल पदहरू
"ली पेटीट रेनने एकू नज रूज" - फ्रांसीसी क्रिसमस क्यारोल
ओरियन क्रू कैप्सूल: एक अर्को चरण मानव स्पेसफ्लाइट
क्रिसमस ट्रूसमा विश्व युद्ध मर्फा
के आर्किटेक्टहरू गणितज्ञ हुनुपर्छ?
अप्रत्यक्ष वस्तुहरू पहिचान गर्ने अभ्यास
के महान स्वर शिफ्ट के थियो?
'80s को शीर्ष उत्पत्ति गीतहरु
दक्षिण अफ्रिकामा महिला विरोधी-पास विधि अभियान
ओभरसामुनिजेशन परिभाषा र उदाहरणहरू
कम SAT वा ACT स्कोर? यी परीक्षात्मक विकल्पहरू हेर्नुहोस्
ट्री बीज प्रचार को लागि अनिवार्य
ट्रिनिटी क्रिश्चियन कलेज प्रवेश
कार्गो पोत आकार वर्गीकरण
कतिपय धेरै प्यानलले पेंटबल गनलाई गोली हान्न सक्छ?
एक कक्षामा हड्डी परिभाषा
हरेक पटियायिक हृदयमा पितृ उत्साह दिग्गज दिवस बोल्नेहरूसँग
UFOs र विदेशीहरूको सच्चा कथाहरू।